राष्ट्रपति सी कस्ता शासक ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » राष्ट्रपति सी कस्ता शासक ?
राष्ट्रपति सी कस्ता शासक ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको भ्रमण गरि असोज २६ गते फर्किसक्नु भएको छ । उहाँ भारत हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर गरेको अन्तरक्रियालाई जोडेर राष्ट्रपति सीको भ्रमण बारेमा चर्चा शुरु भएको थियो । त्यस लगतै राष्ट्रपति सीको भ्रमण भयो ।
२३ वर्षपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहनु भएका राष्ट्रपति सी नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ । यसअघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नु भएको थियो । त्यसपछि भएको यो चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो ।
चीनले राष्ट्रपतिका लागि भएको सीमित कार्यकालको प्रावधान हटाएको छ । योसँगै वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनसफिङलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको छ । चीनमा सन् १९९० को दशकदेखि नै एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने प्रावधान थियो ।
तर सी चिनसफिङले सम्भावित उत्तराधिकारी पेश गर्ने परम्परालाई तोडिएकोछ । सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले सीको विचारधारालाई संविधानमै राख्ने फैसला गरेको थियो । सी चिनसफिङलाई संविधानमा चीनका पहिला कम्युनिस्ट नेता तथा संस्थापक माओत्से तुङको बराबरको दर्जा दिइएको छ ।
पाँच दशक पहिले जब चीनमा साँस्कृतिक क्रान्तिको तुफान आएको थियो, त्यति बेला १५ वर्षका सी ग्रामीण भेगमा एकदमै संघर्षपूर्ण जिन्दगी बिताइरहनु भएको थियो ।
सीको बाल्यकाल उच्च पहाडी क्षेत्रमा बितेको थियो । गृहयुद्धको समयमा कम्युनिस्टको गढ रहेको ठाउँमा सीले खेतीपाती सुरु गर्नुभएको थियो । येनानमा मानिस आफ्नो क्षेत्रलाई चीनको लाल क्रान्तिको पवित्र भूमि मान्ने गर्दछन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि यसलाई चिनियाँ राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण घडीका रुपमा हेरिएको छ ।
चीनले तीब्रगतीमा विकास गरेपनि राष्ट्रपति सीको गाउँ भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका लागि यो एउटा तीर्थस्थलका रुपमा रहेकोछ । सन् १९६८ मा चेयरमेन माओले निर्देशन दिएपछि लाखौँ युवाहरु शहर छोडेर गाउँ गएका थिए । त्यहाँको कठिन र चुनौतिपूर्ण जीवनबाट उनीहरुले धेरै कुरा सिके । कठिन अवस्थामा पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरुले किसान र मजदुरबाट सिके । सीले आफूले पनि त्यहीँबाट धेरै कुरा सिक्नु भयो ।
त्यति बेला सबैले चेयरमेन माओको सानो रेड बुक पढ्ने गर्थे । अहिले चीनमा चेयरमेन सीका ठूला–ठूला राता होर्डिङ बोर्ड देख्न सकिन्छ । उहाँको सम्मानमा एउटा संग्रहालय पनि बनाइएको छ ।
जहाँ सीले किसान तथा मजदुर साथीहरुका लागि के–कस्ता राम्रा काम गरे भन्ने कुराका प्रमाणहरु संग्रहित गरिएका छन् । राष्ट्रपतिको पाँच वर्षको कार्यकाल सी चिनसफिङले निकै नै सफलतापूर्वक बिताउनु भएको थियो । सी आफूलाई यस्तो जननेताका रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि उहाँ गल्ली, सडक र गरिबका घरमा पुग्नुहुन्छ । उहाँ चीनका मात्रै होइनन्, विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ तर उहाँ भूइँमान्छेका लवजमा कुरा गर्नुहुन्छ ।
बाल्यकालदेखि युवाअवस्थामा आउने बेलासम्म सीले दुई प्रकारको जीवन बिताउनुभयो । उहाँका बुवा पनि क्रान्तिका हिरो हुनुहुन्थ्यो । यस्तोमा सीले एक राजकुमारको जस्तो जीवन पनि जिउन पाउनुभयो । साठीको दशकमा चेयरमेन माओले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुमाथि गरेको अन्यायको चपेटामा सी पनि पर्नुभएको थियो । पहिले सीका बुवालाई पार्टीबाट निष्काशित गरेको थियो ।
त्यसपछि उहाँलाई जेल पठाइयो । सीको परिवार निकै नै लज्जित हुनुपर्यो । उहाँको एक बहिनीको पनि मृत्यु पनि भएको थियो । सीको बहिनीले आत्महत्या गरेको बताईन्छ । सीले १३ वर्षको उमेरमै आफ्नो पढाइ छोड्नु पर्यो किनकी बेइजिङमा सबै विद्यालय बन्द गरिएका थिए । परिवार र साथीहरुबिना सी कैयौं दिनसम्म लुक्दै हिँडेका थिए ।
सी आफूले आफ्ना गल्तीहरु बताउँदा आफूलाई आनन्द महसुस भएको बताउँनुहुन्छ । तर उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ कि उहाँले सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँनुहुन्न । साठीको दशकमा चीनको ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवन निकै नै संघर्षपूर्ण थियो । खेतीका लागि मेसिन थिएन ।
त्यसै समयमा सीले मल बनाउन, बाँध बनाउन तथा सडक बनाउने काम सिक्नु भएको थियो । उहाँ जुन गुफामा बस्नु ुहुन्थ्यो, त्यहाँ किरा फट्यांग्राले डेरा जमाएको थियो । त्यहाँ रहेको इँटाको ओछ्यानमा सीसँगै अरु तीन जना पनि सुत्ने गर्थे । खानाका लागि उहाँलाई दाल तथा केही तरकारी दिइन्थ्यो । सी रातिमा टुकीको उज्यालोमा राती गुफामा पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई पढाइको भोक थियो, त्यसो त उहाँ चुरोट पनि निकै पिउनुहुन्थ्यो । उहाँ अक्सर माओको भाषण तथा अखबार पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
१८ वर्षकै उमेरमा उहाँ राजनीतिक यात्रामा लाग्नु भएको थियो । उहाँ कम्युनिस्ट यूथ लिगमा सामेल हुनुभएको थियो । पटक–पटकको प्रयासपछि उहाँ २१ वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नुभयो । कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि उहाँ कट्टर कम्युनिस्ट बन्नुभयो । जब सी २५ वर्षको हुनुभयो । उहाँका बुवालाई पार्टीमा फिर्ता बोलाइयो । उहाँलाई गुआंगडाँगमा काम गर्न पठाइएको थियो । यो ठाउँ हङकङको नजिकमा पथ्र्यो । यो चीनको आर्थिक प्रगतिको पाउवरहाउस बन्यो ।
बुवाको सहयोगले सीले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तीव्रता दिनुभयो । बिस्तारै–बिस्तारै सीले पार्टीमा आफ्नो ठूलै जमात बनाउन सफल हुनुभयो । सन् १९७० को दशकमा उहाँ चिनियाँ सेनामा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेता बन्ने लक्ष्य त्यति बेला नै राख्नुभएको थियो । जीवनका हरेक कदममा उहाँ यही लक्ष्यका साथ अघि बढ्नु भएको थियो ।
सी आफ्नै काममा व्यस्त रहनु हुन्थ्यो । उहाँ निकै अन्तरमुखी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो । सायद यही कारणले गर्दा एक राजनीतिज्ञकी छोरीसँगको उहाँको पहिलो विवाह सफल भएन । हो, यसले उहाँलाई राजनीतिक करिअरलाई अघि बढाउन भने सहयोग र्पुयाएको थियो । सी पेंग लियुआनसँग विवाह गरेपछि चर्चामा आउनु भएको थियो । उहाँ एक मशहूर गायिका थिइन् । वर्षौँसम्म सीको पहिचान उहाँकै श्रीमानका रुपमा थियो । सीले आफ्ना बुवालाई माओले सताएको कुरा देख्नु भएको थियो । त्यसैले पनि उहाँ प्रायः शान्त रहनुुहुन्थ्यो ।
सन् १९८५ मा सी केही दिन एलेनोर ड्वोरचोकको घरमा बस्नु भएको थियो । उहाँ आफ्नो छोराको कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो । भित्तामा ‘स्टार ट्रेक’ चलचित्रको पोस्टर टाँसिएको थियो । एलेनोरको घर अमेरिकाको आयोवा राज्यको मस्केटिन शहरमा रहेको छ । जब सन् २०१२ मा सी आयोवा आउनु भएको थियो । त्यति बेला एलेनोरले भन्नुभएको थियो कि मैले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् कि मेरा घरमा आएका एक व्यक्ति कुनै देशको राष्ट्रपति बन्नु हुनेछ ।
सन् २०१२ मा सी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चुनिनु भएको थियो । उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न तह हुँदै आम सहमतिबाट नेता चुनिनु भएको थियो । तर कसैले यो सोचेका थिएनन् कि पाँच वर्षमा सीको यस प्रकारले विश्व राजनीतिमा उदय हुनेछन् ।
सरकारको शाही खर्च रोक्नका लागि सीले ठूला–ठूला भोजको आयोजना गर्न रोक लगाउनु भएको थियो । जब सी सत्तामा आउनु भएको थियो, त्यसबेला उहाँले जनतासँग एक इमान्दार र स्वच्छ छविको सरकारको वाचा गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउनु भएको थियो । उहाँले साना ठूला सबै भ्रष्ट नेताहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुभयो । उहाँले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि जो पैसा कमाउन चाहन्छन् उ कम्युनिस्ट पार्टीमा नआओस् ।
तर पार्टीमा रहेका झण्डै ९ करोड कार्यकर्तामध्ये धेरैको उद्देश्य पैसा कमाउने नै देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी वर्षौँदेखि घुसखोरी, भ्रष्टाचार तथा नातावादबाटै चल्दै आएको थियो । यस प्रणालीलाई खत्तम गर्न केही ठूला माछा समातेर मात्रै हुँदैनथ्यो । पार्टीका हरेक नेताको कार्यालयको साइजदेखि नेताका लन्चदेखि डिनरसम्म प्रयोग हुने भाँडाको संख्या पनि तोकिदिनु भयो सीले । उहाँ प्रायः गाउँका मानिससँग भेटघाट गर्न गइरनु हुन्छ ।
तमाम प्रयासका बाबजूद पनि सीले पार्टीमा रहेका कैयौं ऐय्यासी नेताबाट आफूलाई अलग गर्न सकेका छैनन् । सी राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले नै उनका कैयौं नातेदार करोडपति भइसकेका छन् । तर यसमा सीको हात रहेको प्रमाण भने प्राप्त भएको छैन । सीलाई चिनियाँ समाज भ्रष्ट भएको थाहा छ । आरामदायी जीवनको खोजीमा पूरा प्रणालीमाथि नै असर पुगेका पनि उहाँलाई थाहा छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ठूला नेता तथा कारोबारी अचानक हराएका छन् । भनिन्छ कि यीमध्ये धेरै नजरबन्दमा छन् । सन्देश प्रष्ट छ कि सीलाई नटेर्नु मर्नु बराबर हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा सीले धेरै नेताहरुलाई पार्टीबाट निकाल्नु भएको छ । सीका विरोधी तथा बागी नेता गुओ वेंगुई भन्नुहुन्छ, सीका नजिकका साथी वाङ आफै भ्रष्ट छन् ।
वाङ भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही गर्ने संस्थाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । तर उहाँले अहिलेसम्म सीमाथि भने सीधै आरोप लगाउनु भएको छैन । सीको भ्रष्टाचार अभियानका बाबजूद पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्वच्छ देखिँदैन । तर प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने सीको चाहनामा भने कुनै कसर बाँकी छैन ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र सीको एउटा तस्विरले तहल्का मच्चिएको थियो । सी र ओबामाको हिँडाइको तुलना कार्टुनको पात्र विनी द पूसँग गरिएको थियो । त्यही बेलादेखि चीनमा इन्टरनेटमाथि निकै सेन्सर हुँदै आएको छ । यसको विरोध पनि हुँदै आएको छ भने मजाक पनि उडाइँदै आइएको छ । चीनमा ७५ करोड व्यक्तिले इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन् । यो संख्या पूरा युरोप र अमेरिकाको भन्दा पनि बढी हो । सीले चीनलाई साइबर सुपरपावर बनाउन चाहन्छन् ।
सी एकातर्फ पार्टीमा नियन्त्रको लडाईँ लडिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ इन्टरनेटमाथि पनि नियन्त्रण चाहनु भएको छ । कानुन र प्रविधिको प्रयोग गर्दै उहाँले इन्टरनेटमाथि काफी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छ् । साइबर सुरक्षालाई सी देशको सुरक्षामा मुद्दाका रुपमा हेर्ने गर्नुहुन्छ । इन्टरनेटको सुविधा दिने र सामाजिक सञ्जालमाथि पनि कडा रुपमा सेन्सर लागु गरिन्छ । चीनमा कोही पनि व्यक्ति नक्कली आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्दैन ।
सी चाहनु हुन्छ चीन एक धनी देश बनोस् । एकजुट बनोस् र शक्तिशाली बनोस् । उहाँ चीनमा एक पार्टीले नै सरकार चलाओस् भन्ने चाहनु भएको छ । उहाँ नागरिकलाई इमान्दार र उत्तरदायी बनाउन चाहनु भएको छ । विश्वविद्यालयमा पार्टीको पहुँच बढाइरहनु भएको छ । पाठ्यपुस्तकबाट पश्चिमी सभ्यताका निशान मेटाउने काम भइरहेको छ । विदेश भ्रमणमा जाने चिनियाँ नागरिकमाथि पनि साइबर सुरक्षा एजेन्सीको निगरानी रहेको हुन्छ ।
सी जिनपिङको शक्ति केवल चीनमा मात्रै सीमित छैन । सन् २०१४ मा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनी एबटले जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई आफ्नो चीन नीतिका बारेमा बताउनु भएको थियो । एबटले अष्ट्रेलियाको चीनसँगको सबन्ध डर लालचको नभएको बताउनु भएको थियो । पूरा विश्वलाई नै चीन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ । सी चिनियाँ मूलका नागरिकसँग आफू बसेको देशमा चीनको महान इतिहास तथा यसको शक्तिको बारेमा सबैलाई बताउन आग्रह गरिरहनु भएको छ । वर्तमान समयमा चीनको शक्तिलाई पूरै विश्वले स्वीकारेको छ ।
सी चिनसफिङ माओको परम्परालाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको छैन । उहाँले चिनियाँ नागरिकसँग चीनलाई धनी र शक्तिशाली बनाउने वाचा गर्नुभएको छ । सत्तामा जनताले चासो दिए भने कति खतरनाक हुन्छ यो उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले पनि उहाँ नागरिकलाई अभिव्यक्तिको धेरै स्वतन्त्रता दिने पक्षमा हुनुहुन्न । सी चिनसफिङले सोभियत संघको पतनबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु भएको छ । उहाँले यो मान्नुहुन्छ कि कि सोभियत संघको विघटन आफ्नो उद्देश्य बिर्सेका कारणले भएको हो । एउटा भाषणमा सीले भन्नुभएको थियो, कि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै सदस्य रहेका थिए । तर पनि कसैले विघटन रोक्नलाई प्रयास नगरेको सीको आरोप छ ।
सीको शासनकालमा मुसलमान, इसाई, मजदुर कार्यकर्ता, ब्लगर, पत्रकार, महिलावादी तथा वकिल सबैलाई जेल हालिएको छ । उहाँ आन्दोलन गर्ने जोसुकैको पनि विपक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले खुलेर सरकारको आलोचना गरेकोलाई मन पराउँनुहुन्न । चीनका बारेमा सिंगापुरका महान नेता ली कुआन यूले भन्नुभएको थियो, ‘चीन विश्व इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो ।’
सन् २०१२ मा सत्तामा आएसँगै सीले चीनलाई विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो । सन् २०४९ सम्म चीन पूर्ण रुपमा विकसित धनी र सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्नेछ । छिट्टै नै चीनको अर्थव्यवस्था अमेरिकाको भन्दा ४० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । सन् २०४९ सम्ममा खरिदको विषयमा चीनको अर्थव्यवस्था अमेरिकाको भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ ।
पश्चिमा देशले चीनका लागि ढोका खोलेको थियो, सीका पुस्ताका धेरै चिनियाँ नागरिकले देश छोड्ने निर्णय गरेका थिए । तर सीलाई यो थाहा थियो कि देश छाडेर जानेहरुका लागि केही गर्न सकिन्न । उहाँ विदेशीहरुसँग एकदमै आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ‘चीनले क्रान्तिको निर्यात गर्दैन । भोकमरी र गरिबीको निर्यात गर्दैन । चीनले तपाईँको टाउको दुखाउने काम पनि गर्दैन । तपाईँलाई अरु के चाहियो ।’ सीले विरासतमा जुन चीन पाए त्यो शक्तिशाली चीन थियो । त्यो चीन आफ्नो शक्तिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो । त्यो मौका भने चीनलाई सीले दिनुभयो ।
चमक–धमकभन्दा बाहिर चीनमा आर्थिक समस्या पनि रहेको छ । चीनको विकासको गति विस्तारै घटिरहेको छ । सरकारमाथि ऋणको बोझ पनि बढिरहेको छ । धेरै अर्थशास्त्रीले चीनका लागि सुधारको बाटो अपनाउने समय घर्किँदै गइरहेको बताएका छन् । एकातिर वैचारिक एकता कायम भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ चीनको नयाँ रणनीति र परिवर्तन राजनीतिक परिघटनालाई लिएर अनेक अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । सीभन्दा पहिले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उतारचढाव झेलेको छ । माओकै समयमा भोकमरीदेखि सांस्कृतिक क्रान्तिसम्मका चुनौति पार गर्दै आएको छ । त्यस्तै सन् १९८९ मा चीनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सामना गर्यो ।
(उज्यालो अनलाइनबाट सम्पादीत अंश)